Aqoonsiga, Iskaashiga iyo Dhiirigelinta - Milyaneyaasha Malaayiin
Aqoonsi, iskaashi iyo dhiirrigelin
sano oo waayo aragnimo ah 11
1000 + Mashaariicda
Tayada caalamiga ah
Golaha Wadajirka ah ee Daryeelka Muhaajiriinta
Golaha Wadajirka ah ee Daryeelka Muhaajiriinta waa urur madaxbanaan oo qaran oo tabaruc ah, una ololeeya caddaaladda iyo la dagaallanka midab-takoorka ee sharciga socdaalka iyo sharciga magangalyada.
Ururka lataliyayaasha laanta socdaalka ee sharciyeeyay
La-taliyayaasha Soo-galootiga waa xubno ka tirsan Ururka La-taliyayaasha Socdaalka ee Jaangoynaya oo ah Ururka xirfad-yaqaannada ee La taliyayaasha Socdaalka ee Joogtada ah ee Boqortooyada Midowday. Ujeedada Ururka La taliyayaasha Socdaalka ee Sharciga ah ayaa ah in la dardar geliyo xirfadahooga dhammaan la taliyayaasha socdaalka ee la habeeyay iyo in la dhiso iskaashi / isuduwid iyo in la wanaajiyo xidhiidhka ka dhexeeya dhammaan laamaha socdaalka ee la aqoonsan yahay ee socdaalka, ururada iyo hay'adaha.
Bulshada maaraynta kheyraadka aadanaha
Xirfadlayaasheena HR waa xubno ka tirsan bulshada maaraynta kheyraadka aadanaha waxayna raacaan dhaqamada ugu wanaagsan ee HR ee ka socda Dunida.
Ururka Teknolojiyada Macluumaadka ee Kanada
Caawimaadda Sharciga iyo Socdaalka ee Boqortooyada Midowday
Milyan Sameeyayaasha iyo kuwa nala shaqeeya waxay ku shaqeeyaan iyaga oo matalaya isla markaana kormeeraya Qareennada EEA iyagoo u hoggaansamaya Qaybta 84 ee Sharciga Socdaalka iyo Magangelyada ee 1999. Waxaan la shaqeynaa la-taliyeyaasha socdaalka ee UK oo lagu maamuley Xafiiska Wakiilka Adeegyada Socdaalka (OISC). OISC ayaa mas'uul ka ah habeynta la taliyayaasha socdaalka iyadoo la raacayo Xeerka Heerarka iyo Xeerarka Guddoomiyaha.
Kaalmada iyo Soogalootiga Mareykanka
Garyaqaanadeena Mareykanka ee aqoonta u leh ayaa xubno ka ah Ururka Qareennada Mareykanka waxayna sidoo kale xubno ka yihiin Ururka Qareennada Muhaajiriinta Mareykanka (AILA), oo la aasaasay 14-kii Oktoobar 1946 waana urur mutadawiciin ah oo qareenno ah oo ay ka badan yihiin 15.000 qareenno iyo macallimiin sharci oo ku dhaqma oo bara sharciga socdaalka.
Caawimada Socdaalka ee Australia
La-taliyayaasheena Socdaalka iyo qareennada Australiyaanka ah waxay ka diiwaan gashan yihiin Hay'adda Diiwaangelinta Wakiilada Socdaalka (MARA) oo ah hay'adda diiwaangelinta rasmiga ah ee la-taliyayaasha socdaalka ee Australiya sida looga baahan yahay sharciga Australia.
La-taliyayaasha Socdaalka ee Golaha Sharci dejinta Kanada
La-taliyayaasha laanta socdaalka ee Kanada ee bixiya adeegyada socdaalka ee macaamiisheena ayaa xubno ka ah La-taliyayaasha Socdaalka ee Golaha Nidaaminta Kanada. La-taliyayaasha Socdaalka ee Golaha Nidaaminta Kanada (ICCRC) (Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC)) waa hay'adda sharci-dejinta ee waddanka oo dhan oo ay u sameysay Dowladda Kanada si ay u kormeerto una ilaaliso macaamiisha u baahan adeegyada la-taliyayaasha Socdaalka Kanada.
Ururka La-Talinta Shirkadaha ee Latin American
Saaxiibbada aan la shaqeyno ee Latin America waa xubno ka tirsan LACCA. Ururka La-Talinta ee Laatiin Ameerika wuxuu isu keenayaa hogaaminta lataliye-ka-dhex-shaqeynta ka shaqeeya gobolka, isagoo siinaya fursad ay ku is-waafaqaan, ku wadaagaan fikradaha iyo ku-dhaqanka ugu wanaagsan iyo xiriir ay la yeeshaan asxaabta guud ahaan Latin America.
Ujeedada ugu weyn ee Adeegga Sharciga ee Yurub waa in la siiyo ilaalinta sharciga muwaadiniinta, ururada iyo shirkadaha.
Wada-hawlgalayaasha Istaraatiijiyada tooska ah ee internetka
U hogaansanaanta khadka tooska ah
Thanks gaar ah u dir Send Plus, taageeradooda iyo kalsoonida ay noo qabaan.
Mahad gaar ah
Wada-hawlgalayaasha Ka Kooban
Waxaan soo xusnay in yar oo ka mid ah Xisaabtanka iyo Iskaashigeenna.
Sababo la xiriira xirfadeed awgeed, aad ayey u adag tahay in la shaaciyo dhammaan ururadeenna, laakiin, waxaa naga go'an inaan ku siino taageerada ugu wanaagsan iyo adeegga, adiga si aad u gaartid himilooyinkaaga, himilooyinkaaga iyo himiladaada, ku dhawaad ​​meel kasta oo adduunka ka ah qiimeynta ugu wanaagsan iyo Qaabka lacagta.
* Ogeysiis Ma aqbalno meeleynta aan ka qabno shaki yar si aan u siino dammaanadda adeegga ugu wanaagsan.
Milyaneyaasha Malaayiinta ayaa ah hal xalliye xallinta xallinta si ay u bixiyaan xalalka ganacsiyada ka caawin kara ganacsigaaga kaliya ma ahan IT Solutions laakiin sidoo kale in ay ku ballaariyaan gudaha laakiin sidoo kale caalami ahaan, kuma koobna oo keliya horumarinta Webka, xalalka Ecommerce, Horumarinta barnaamijyada, suuqgeynta dhijitaalka ah, xalalka software iyo Kobcinta kobcinta teknolojiyada ee loo yaqaan 'Blockchain tecnologie iyo hirgelinta ganacsigaaga qiimo aad u tartan badan, laakiin, waxaan sidoo kale bixinnaa xalka si loo dhammaystiro albaabka lacag bixinta, adeegyada sharciga, la-tashiga maaliyadeed, xalalka HR ee gaarka loo leeyahay, shirkad isku-dar ah oo ka mid ah 98da maamul ee ku habboon baahiyahaaga ganacsi, furitaanka akoonnada bangiga, diiwaangelinta astaamaha ee 119 dal oo leh hal foom oo keliya, in la magacaabo dhowr.
Waxaan sidoo kale bilawnay bilaw, taasi waa sababta, waxaan fahamsanahay shuruudaha, qorsheynta iyo tababarka loo baahan yahay, xanuunka. Waxaan ka caawinaynaa, taageernaa iyo lataliye Bilaabista si aan ugu dhaqaaqno dariiqa saxda ah ee waqtiga ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah kharashyada ugu hooseeya ee suurtagalka ah.
Taageerada Aqbaarta Macmiilka
Kordhinta & Maalgelinta
Waxaan leenahay shabakad aad u ballaaran oo maalgashadeyaal caalami ah, sidaa darteed, taageero ahaan, waxaan sidoo kale gacan ka geysannaa inaan ku xirno bilaabiyeyaasha bilowga ah maalgashadayaasha imaan kara.